Likhuphuka Okwethusayo Inani Labahlukunyezwayo Uzulu Evalelwe Ezindlini Ngesikhathi seCOVID-19 Lockdown
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations Office of the Coordination of Humanitarian Affairs ithi ziyakhuphuka izehlakalo zokuhlukumezana emulini kwele Zimbabwe ilizwe lilwisana lokumemetheka kwegciwane leCOVID-19.
Inhlanganiso le ithi ukuhlukumezana lokhu kuqonge ngesilinganiso sokungamakhulu amabili ekhulwini - 200%, kulandela ukuqhamuka kwegciwane leCoronavirus, okulandelwe yikuvalwa ngci kwelizwe kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo.
Inhlanganiso le ibika ukuba phakathi kuka Zibandlela kusiya kuMpandula, 2020, amacala edlula inkulungwane ezinhlanu - 5,507 amangalwe kuNational GBV Hotline.
Ithi inani labahlukunyezwayo likhuphuke kakhulu ngesikhathi ilizwe livalwe ngci phansi kweziqondiso zeLockdown.
Olwela amalungelo oluntu umqondisi weYouth for Innovation Trust, uThando Gwinji, uthi kuzwisa ubuhlungu ukuba amacala eGender-Based Violence lokhu esanda elizweni.
Omunye njalo olwela amalungelo oluntu, ongumqondisi weHabbakkuk Trust, uMnu. Dumisani Nkomo uthi ukulwa lokhu kubangwa yikuthi abantu abanengi kabasasebenzi.
Inhlanganiso le iphinde yathi abantwana beZimbabwe abedlula 4,6 million balahlekelwe yizifundo njalo lezikolo bezingekho esibangeni sokutholisa imfundo kahle kuthi abafundi abedlula 1-7 million bebengasatholi ukudla esikolo.
Liyakhuphuka Inani Labakhahlanyezwa Ezindlini